Ikhaya le-Driggs--ukubukwa nobumfihlo, 3 BR+loft, 1.5 acres
Ikhaya lesitayela esihle sesimanje esinesitayela sezakhiwo esiyingqayizivele, Amakamelo okulala ama-3 + Loft, Amabhavu ama-2 (Ukulala 11), uhlelo lwaphansi oluvulekile, kumahektha ayi-1.5 ukusuka kuSki Hill Road, phakathi kweDriggs neGrand Targhee Resort (ukushayela imizuzu eyi-15 ukuya eGrand Targhee).
I-House isohlwini kwamanye amawebhusayithi aqashwayo aku-inthanethi ngaphezu kweminyaka engu-4, enesilinganiso sezinkanyezi ezingu-4.8 ezinkanyezini ezingu-5 (izilinganiso ezingu-94), kusukela ngo-Okthoba 2020. Ukuze uthole imininingwane mayelana nokubuka lezi zilinganiso, sicela uxhumane nomnikazi.
Ukubuka okuhle kwe-Grand Teton nezintaba ezizungezile ngamafasitela ezithombe ezinkulu, ubumfihlo obuningi, nokuthula nokuthula. Kuwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya edolobheni, lapho kukhona isitolo segrosa esihle kakhulu, sesimanjemanje, isitolo sewayini esihle, izitolo eziningi zangaphandle kanye nezimpahla zezingubo, nezinye izitolo eziningi, kanye nezindawo zokudlela ezimbalwa ezinhle kakhulu. Kungamamayela angu-9.7 (cishe amaminithi angu-15. ukushayela) ukhuphukela endaweni ye-ski, lapho kukhona okumangalisayo kokwehla komqansi kanye nokushushuluza kwe-nordic, kanye negquma le-tubing.
I-air conditioning ifakiwe--ayivamile e-Teton Valley!
Imibhede yabayishumi kulendlu enhle.
Izinsiza endlini zihlanganisa:
*I-Master BR enombhede ongusayizi wenkosi, ikhabethe elikhulu lokungena, negumbi lokugezela elikhulu elifaka ubhavu omkhulu, usoaker onamajethi e-whirlpool, ishawa, nosinki abakabili.
* I-2nd BR enombhede wenkosi
* Igumbi lokugeza lesibili eligcwele elineshawa / i-combo yokugeza
* Igumbi / umhume omkhulu omkhulu onokubuka okumangalisayo ngamawindi amakhulu ezithombe ezinkulu, kanye ne-TV ene-Hulu Live TV (amashaneli amakhulu kakhulu ekhebula nesethelayithi) kanye ne-Amazon FireStick yokusakaza okuqukethwe.
* Indawo yokudlela enetafula lokudlela elinamaqabunga nezihlalo ezikwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-10
* Ikhishi elikhulu, eligcwele elinazo zonke izinto zikagesi (okuhlanganisa i-Kitchenaid mixer, iprosesa yokudla ewusayizi ogcwele, i-Vitamix blender, nebhodwe elikhulu lokugezela)
* Iwasha engusayizi ogcwele nokomisa
* Indawo ephezulu ene-TV / iDVD ene-Hulu Live TV, ithebula legeyimu elingusayizi ongu-70% (i-ping pong / ichibi; i-hockey yomoya ayisebenzi okwamanje), kanye ne-futon egoqelwe phansi ngosayizi ophindwe kabili.
*Igumbi lesithathu lokulala elinemibhede emi-2 eyodwa nombhede ongu-1 wendlovukazi
* I-Anteroom enombhede ophelele ongalala abantu abangu-2 abengeziwe.
I-Grand Targhee ihlale ithola iqhwa eliningi kunanoma iyiphi enye indawo e-Idaho, futhi inokushushuluza okukholakalayo okuyimpushana! Ukwengeza, kuso sonke isigodi kunamathuba amaningi okushushuluza eqhweni kanye ne-snowshoeing ebusika.
Lapho iqhwa lincibilika, imizila mihle yokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, futhi kukhona amakhonsathi omculo angaphandle amangalisayo nemikhosi. Kukhona futhi ukudoba okumangalisayo kwempukane endaweni enemifula engu-3 eyaziwa emhlabeni wonke (i-S. Fork Snake, i-Henry's Fork, ne-Teton) kanye ~ 20 nemifudlana emincane ekhiqizayo phakathi nohambo lwemizuzu engama-60.
Siyimizuzu engama-45 ngokushayela endaweni yokudlula eya e-Jackson Hole, kanye nokushayela ihora ukuya e-Yellowstone National Park. Abantu abaningi bathi ihlobo lase-Teton Valley lingcono nakakhulu kunobusika--woza uzozibonela!
Ukuze uthole imininingwane mayelana nokushushuluza eqhweni / eqhweni / eqhweni eqhweni eqhweni ebusika kanye nemikhosi yomculo / ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni / izintaba ngesikhathi sasehlobo e-Grand Targhee, hlola iwebhusayithi ye-Grand Targhee.
Sicela uqaphele ukuthi sinakekela indlu yethu ngesitayela "se-western rustic" esigxile ekongiweni. Indawo ephakeme esigodini ezungeze indlu yinhle, futhi asiyinqumi ngesikhathi sasehlobo ngaphandle kwendawo eyimitha eyodwa eduze komgwaqo ongaphambili kanye nokuzungeze uvulandi ongemuva kanye nendawo yomgodi wesicathulo samahhashi. Lokhu kuvamile kule ndawo. Asifakanga utshani ngoba lokho akuyona imvelo endaweni, futhi kudinga amanzi engeziwe kungenasidingo. Sigcina indlu entofontofo kakhulu nefenisha kanye nezingubo zokulala zezivakashi zethu. Kalula nje, le ndlu kanye nempahla kusendaweni enhle enokubukwa okuhle, ukunethezeka okuhle kakhulu, nezinto eziningi ezinhle esizithandayo.
Sicela uhlole indlu yethu, kanye nenye yezindawo esizithandayo Emhlabeni. Futhi ngicela ungazise uma unemibuzo noma udinga izincomo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngifuna ujabule ngokuhlala kwakho endlini yethu nesikhathi sakho eTeton Valley!
Ithule kakhulu futhi iyimfihlo, indawo eyihektare eyi-1.5, enokubukwa okungu-360 kwezintaba ezizungezile. Amahhashi kwezinye izakhiwo eduze kwendawo yethu.
Umnakekeli wami uku-Driggs futhi uyatholakala uma kuphakama izinkinga noma kudingeka ukulungiswa okuncane.